Incwadi kubafundi bam - ii-Geofumadas
Uqikelelo emva kweentsuku 925.41666666 emva kokuqala ukupapashwa izimvo kule ndawo yaziwa ngokuba egeomates, naphezu olwandulela nyaka uza kuqalisa, ndifuna (kwaye ndiziva ukuba) ndinganyikimisi inki abafundi indlela gca.
Le mihla kunzima ukuchonga ixesha elifanelekileyo umfundi, kungekhona nje ngokuba umxholo wedijithali awuphelelanga ngomzuzu olandelayo, kodwa ngenxa yokuba le ndlela entsha kwiblogi ebizwa ngokuba yimveliso yengqondo kunzima ukugwinya ngaphandle kokulungileyo lemon ngomlomo. Ndivela kwisizukulwana esashicilele iincwadi kwiifom ezishicilelweyo, ezithe zagqithwa ngumbononongo wokuhlaziya, ukuhlukana kombala, irekhodi ye-bibliographic, njl njl. Baqhele uzisondeze iqela elincinane iindwendwe: ababekade esikolweni, emsebenzini kunye nosapho lo mcimbi imizuzu 23, ahamba kude incwadi yakhe autographed phantsi kwengalo yakhe emva ukwanga ekhawulezayo, Akundanganga esidleleni. Kwaye kwabakho abambalwa abazaziwa abafundi, ukuba ngaphambi kokuba babone incwadi babonakala beyazi umxholo wayo, obani ixesha elingeke lanele ngokwabo, bamba izandla kwaye kutheni kungabanga (eso sityebi). Baxela le ncwadi kumbala wokubuyiswa kwakhona, ngoko kwiivenkile zaza kukunika isibingelelo sokubonga kwaye ngenxa yokugqithisa kweengubo azilenga.
Namhlanje, ubuninzi bezo buye batshintsha (ubuncinci kum), ukusabalalisa kukuzonwabisa kunye neendlela zokungena ezenza umxholo kwimigqomo embalwa nje. Kodwa ngenxa yale nto sifanele sifunde imigaqo engaqhelekanga njenge-rss, feed, i-2.0, ithegi, i-slug, i-ping, imisebenzi emininzi yokusebenza kufuneka ibe nemiqondiso yepesenteji (%), i-underscore (_), kwi-(@), icatshulwa kunye ingqondo elifanayo sicatshulwa, kwakhona isihloko kubonakala ukuba yinkcitha xesha, i-protocol of esi sibhalo kukho url elula, itekisi sele zifomathiwe Kulityala ukuba indlela ukuxubana (CSS). Ngamafutshane, ubuninzi be-romance ngoku ngumqobo.
Emva koko i-Google Analytics isenza sihlule Abafundi phakathi labo ababuyayo kwaye abo beza ukusombulula likaxakeka, abo bavela iinjini zokuphendla kunye nabo abangena ngqo, abo bafunda ukuba livule blog kwaye abo baqhubeka ukondla abafundi, sloshing lixesha e-Internet Explorer kunye bokuhlela evule nge Safari okanye chrome. Konke oku ibhonche kwiindidi kunokwenzeka ukulahlekelwa usuku lonke ngaphandle kokuvelisa nantoni na ezama ukuqonda iimpawu zabathengi, ekugqibeleni sigqiba ukuziyeka ukuzibala njengamanani nje.
Kodwa kukho konke oku, iingenelo zigqithise kakhulu uthando. Ukwazi ukuba umfundi uchithe ngaphezu kweyure ufunda inkqubo kuyavuyisa ukwazi ukuba ukusuka kwidolophu encinane ukuba 300 ukusuka Lima umntu omamele indibaniselwano ngeveki ukufunda omfuthelayo ye ophambeneyo, ukwazi abasabela ngayo abo ngenye imini ukungaziwa lekhefu ukuze izimvo nokuba ngosuku lokungabi namacala. Oku kunye nokunye kunomdla.
Kungenxa yoko, ukwenzela ukuyeka ifilosofi malunga nento yonke umntu esaziyo ngaphambili ...
Ndibulela sincerest kwabo baye bamkela le ndawo, phezu 2.5347 iminyaka baye mandincedeke kulo isiqulatho ukuze sihlale kwi imeko yokufihla, umbuliso kamnandi. Kulabo abaneposi kunye nokuba emva kokudibanisa ndicinga abahlobo bam, siyabonga ngenxa yokuba ithemba lakho lenze ukhulula umxholo othile, osikhumbuza ukuba phakathi kwesi sigxina semeko yee geospatial sikhoyo.
Ndiyazi ukuba i-2010 iya kuba ngumnyaka omkhulu, ndiyakwazi ukuzibona emehlweni akhe ... kwaye sifanele siphile kunye naloo nto.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Geofumadas: Izibikezelo ze-2010: Intanethi
Post Next I-Bentley Cadasatre: iintlukwano kunye neBentley Imephu kunye neMephu yeMandlaOkulandelayo "